दुईदिन भित्रै पर्याप्त मात्रामा मल आउने हिराचन्द्र केसीको दाबी – जागरण अनलाइन
दुईदिन भित्रै पर्याप्त मात्रामा मल आउने हिराचन्द्र केसीको दाबी
२०७६ असार ३१, मंगलवार २२:३३ मा प्रकाशित
‘हापुरेदेखि कोहलपुर जोड्ने सिधा बाटो खोल्छु’ –हिराचन्द्र केसी
दाङ । प्रतिनिधिसभा सदस्य हिराचन्द्र केसीले अबको दुईदिन भित्रमा प्रयाप्त मात्रामा रासायनिक मल आइपुग्ने बताएका छन् ।उनले कुरागर्दै दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित नेकपाका नेता समेत रहेका केसीले त्यस्तो आश्वासन दिएका हुन । त्यसको लागि आँफुले भैरहवामा फोन गरेर बुझ्दा आफुलाई अबको दुईदिन भित्र प्रयाप्त मात्रामा मल आइपुग्छ भन्ने जानकारी दिइएइको बताए । किसान भने असारको महिना सकिनै लाग्दा समेत डिएपी मल नआएर बजारमा भौंतारिरहेका भेटिन्छन् ।
मुख्य बाली धान खेतिको समयमा किसानले मल नपाउनु विडम्वना भएको बताएका उनले त्यसका लागि आँफुले पहल गरिहरेको केसीले जानकारी दिए ।
मलको अभावमा व्यापारीले कालोबजारी गरिरहेको कतिपय किसालने गुनासो गरेका छन् । ‘२५ सयमा किन्ने पाईने मल ३७ सय भन्दा बढीमा बेच्ने गरिन्छ । त्यति महंगो मल हालेर किसान कसरी उठ्न सक्छन्?’ एक किसानले गुनासो गरे ।
फरक प्रशंगमा उनले जिल्लामा यो पटक विाकसका लागि अति राम्रो र प्रसस्त रुपमा बजेट आएको दाबी गरे । दाङको समग्र विकासका बारेमा आफुले संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र प्रदेश सकारका सांसदहरु संगपनि छलफल गर्दै आएको उनले बताए । ‘जिल्लाको विकासको सवालमा महराजीपनि उत्तिकै चिन्तित हुनुहुन्छ, सांसद केसीले भने ‘ मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलपनि उत्तिकै सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ।’
हापुरेदेखि कोहलपुर सिधा बाटो खोल्छु
सांसद केसीले पश्चिम दाङको जनताको सुविधाको लागि आफुले हापुरेदेखि कोहलपुर जोड्ने सिधा बाटो खोल्ने योजना अगाडि सारेको सांसद केसीले बताए । त्यो बाटो खुलेपछि हापुरेका जनता सिधै कोहलपुर जान सक्ने र उनीहरु त्यसपछि घुमेर तुलसीपुर आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको कथन थियो । त्यो बाटो अवको तीन बर्ष भित्र काम सक्ने गरि काम हुने सांसद केसीले दाबी गरे । अब निकट भविस्यमै त्यसको सर्भे र डिपिआर भएपछि काम सुरु हुने उनले बताए । आँफुले फूलवारी हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोडिने पुरानो बाख्रेको बाटोमा ट्रयाक खोलेको सांसद केसीले जानकारी दिए ।
‘मैले ट्रयाक खोल्ने काम पुरा गरे अव त्यो बाटोको स्तरउन्नतिको लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाएको छु,’ सांसद केसीले भने । उनले यसपटक जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि पनि प्रसस्त बजेट आएको बताए । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा दरवन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताएका उनले त्यो समस्या समाधान गर्न आफुले पहल गरिरहेको बताए । ‘हामी सिस्टम बसाल्ने गरि काम गरिरहेका छौं,’ सांसद केसीले भने ‘अबको एकाध बर्षमा अस्पताल हुने तर दरवन्दि अनुसारको चिकित्सक नहुने समस्या रहने छैन।’ उनले जिल्लामा पहिलेको तुलनामा विकासका योजनाहरु धमाधम अगाडि बढेको दाबी पनि गरे ।
पछिल्लो समय विभिन्न घटनाका कारण पत्रकारहरुप्रति विश्वास घट्दै गयो–उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेल २०७६ असार ३१, मंगलवार २२:३३
सर्वोच्चको प्रश्न : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने कानुन किन बनाएको ? २०७६ असार ३१, मंगलवार २२:३३
संसदमा रवि लामिछानेको विषयमा प्रसंग उठाउदै शान्ता चौधरीको अनुसन्धान प्रभावित हुनेमा चिन्ता ब्यक्त २०७६ असार ३१, मंगलवार २२:३३